काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंकसँग १०० : ५० को सेयर स्वाप रेसियोका आधारमा लक्ष्मी बैंक मर्जरमा जान लागेको समाचारले सोमबारको बजारमा सो बैंकमा मूल्यमा उछाल आएको छ । लक्ष्मी बैंकको मूल्य कारोबार सुरु भएको पहिलो एकघण्टाभित्रै १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेपछि पोजिटिभ सर्किट ब्रेकर लगाइएको छ । एभरेष्ट बैंकसँग अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो सेयर...
काठमाण्डौ । दुई महिनाअघि नै टुंगिने भनिएको एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकबीचको मर्जरको निश्कर्ष यही साताभित्र आउने भएको छ । एभरेष्ट बैंकस्थित उच्च स्रोतका अनुसार डिडिए रिपोर्टका आधारमा दुवै बैंकका उच्च अधिकारीहरुबीच प्रत्येक दिनजसो बाक्ला छलफलहरु भइरहेका छन् । छलफल सकारात्मक ढंगले नै अगाडि बढिरहेको छ । बैंकका एक उच्च अधिकारीले...
वासिङ्टन(रासस/एएफपी) । संयुक्तराज्य अमेरिकाको क्षेत्रीय रणनीति कार्यान्वयनमा पाकिस्तानले “निर्णायक भूमिका निर्वाह नगरेको” आरोप लगाउँदै करिब ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु. ३१ अर्ब) सहायता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागनले जनाएको छ । अमेरिकाले पाकिस्तानभित्र रहेका लडाकूहरुका सुरक्षित आश्रयस्थलहरु...
लक्ष्मी बैंकको नाफामा औसत प्रगति, अन्य सूचक पनि मध्यम
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म १ अर्ब १६ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १ अर्बको हाराहारीमा नाफा आर्जन गरेको थियो । लक्ष्मी बैंकले यो अवधिमा ४ करोड २८ लाख संभावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता ल्याएको देखिन्छ । बैंकको संचालन मुनाफा समेत बढेको छ ।...
बाराको कलैयामा लक्ष्मी बैंक
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा बुधबार बाराको कलैयामा आफ्नो नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएकोे छ । यस नयाँ शाखाको साथ, लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल ८५, ४३ जिल्ला, ३ हस्पिटल सेवा काउण्टर, १०३ एटिएम, २५०० भन्दा बढी रेमिटेन्स, ५१ शाखारहित बैंकिङ्ग अनि ४०० भन्दा बढी मोबाईल एजेण्टहरु पुगेको छ । यी शाखाहरुका साथ...
सेनाको पश्चिम पृतनामा लक्ष्मी बैंकको एटिएम
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले पोखराको पश्चिम पृतना हेडक्वाटर बिजयपुर व्यारेकमा बिहीबारदेखि ए.टि.एम सेवा संचालनमा ल्याएकोे छ । यस ए.टि.एमको सेवा व्यारेकका सैनिकहरुका लागि मात्र नभई, सर्वसाधारणहरुका लागि पनि उपलब्ध हुने बैंकले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । ए.टि.एमको उद्घाटन पृतनापति देवेन्दबहादुर मेधासी र लक्ष्मी बैंकको तर्फबाट...
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकबीचको मर्जर सम्झौता हुन्छ या हुँदैन भन्ने बिषय टुंगो लाग्ने समय फेरि एक महिना पछाडि धकेलिएको छ । यसअघि जेठ दोश्रो सातासम्म डिडिए सकिने र त्यसपछि एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकबीच मर्जर सम्झौता भई काम अगाडि बढ्ने भनिएको थियो । तर, डिडिएमा संलग्न विदेशी कम्पनीले थप एक महिना समय मागेपछि अब छिटोमा असार १५(जुन...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक तथा बिपि नेत्र प्रतिष्ठान, बाल अस्पताल, आँखा, नाक कान घाँटी अस्पताल तथा पुनःस्थापना सेवासँग विभिन्न प्रदेशहरुमा सञ्चालन गर्ने कानको शल्यक्रिया क्याम्प सञ्चालन गर्न द्वीपक्षीय सम्झौता (एमओ यु) भएको छ । पहिलो ३ दिनकने क्याम्प बाराको निजगढमा हुने बैंकले जनाएको छ । यही जेठ १४ तगेदेखि जेठ १६ गतेसम्म सञ्चालन...
एकैदिन लक्ष्मी बैंकका २ शाखा बिस्तार
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्ना शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा बुधबार सल्यानको ढोरचौर र रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा नयाँ शाखाहरु संचालनमा ल्याएकोे छ । यी थप शाखाहरुका साथ लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल ८४, ४२ जिल्ला, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, १०१ एटिएम, २५०० भन्दा बढी रेमिटेन्स, ५१ शाखारहित बैंकिङ्ग तथा ४०० भन्दा बढि मोबाईल एजेन्टहरु...
लालबन्दी र बेलबारीमा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा सोमबार सर्लाहीको लालबन्दी र मोरङ्गको बेलबारी गाउँपालिकामा नयाँ शाखाहरु संचालनमा ल्याएकोे छ । यी थप शाखाहरुको साथ लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल ८०, ३ हस्पिटल सेवा काउण्टर, १०१ ए टि एम, २५०० भन्दा बढि रेमिटेन्स्, ५१ शखारहित बैंकिङ्ग अनि ४०० भन्दा बढि मोबाईल एजेन्टहरु पुगेको...
काठमाण्डौ । बुधबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेर एकीकृत कारोबार सुरुवात शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले देशको बजार अनुसार बैंकहरुको संख्या अझै अधिक रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकले पूँजीवृद्धि र मर्जरको नयाँ नीति ल्याउनसक्ने संकेत गरे । गभर्नरले...
नाफामा ४१ % को फड्को मारेको लक्ष्मी बैंकको रिजर्बमा किन गयो पहिरो ?
काठमाण्डौ । खूद नाफातर्फ ४१ प्रतिशतको छलाङ मारे पनि लक्ष्मी बैंकको रिजर्ब कोषमा भने पहिरो गएको देखिएको छ । बैंकले मंगलबार प्रकाशित गरेको अपरिस्कृत तेश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार ५६ करोड ९१ लख रुपैयाँमा सीमित नाफा बढाएर ८० करोड २६ लाखको उचाई चुमाए पनि बित्तीय स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण सूचक रिजर्ब कोषमा भने ५० प्रतिशतको...
काठमाण्डौ । नयाँ वर्ष २०७५ को शुभ अवसरमा लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले आफ्नो भिजा कार्ड प्रयोगकर्ताका लागि क्यास ब्याक अफर ल्याएको छ । जसअन्तर्गत लक्ष्मी बैंक लिमीटेडबाट भिजा कार्ड लिएका सबै ग्राहकहरुले नेपाल तथा भारतमा कार्डमार्फत अनलाइन पिओएसबाट जुनसुकै किसिमको खरिदमा १० प्रतिशत वा रु. १००० सम्म रकम पुनः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सुरक्षित एवं नविनतम सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित भेरफाइड बाई भिजा(भीबीभी)–थ्रीडी सेक्योर सर्भिसबाट सुनिश्चितता प्रदान गरिएकोे भिसा डेबिट कार्डहरु ल्याएको छ। यस्तो सुनिश्चितताले ग्राहकलाई अनधिकृत कारोबार हुनबाट जोगाउने बैंकको दाबी छ । एक पटक रजिस्टर्ड गरेपछि भिजा डेबिट...